Iindaba -Uzivelisa njani iimagnethi eziSintered Neodymium?
Sintered NdFeB umazibutheNgumazibuthe we-alloy owenziwe nge-Nd, Fe, B kunye nezinye izinto zesinyithi.Ukunye nomazibuthe onamandla, amandla anyanzelekileyo. Isetyenziswa ngokubanzi kwiimoto-mini, iijenreyitha zomoya, iimitha, iisenzi, izithethi, inkqubo yokumiswa kwemagnethi, umatshini wokuhambisa umazibuthe kunye nezinye izinto zokwenza. Kulula kakhulu ukubola kwiindawo ezinomswakama, ngoko ke kuyimfuneko ukwenza unyango lomhlaba ngokweemfuno zabathengi. Sinako ukunikela ukutyabeka, ezifana Zinc, Umzimveliso, Umzimveliso-ubhedu-nickel, Isilivere, igolide nesingxobo, Epoxy ukutyabeka, njl Grade: N35-N52, N35M-48M, N33H-N44H, N30SH-N42SH, N28UH-N38UH, I-N28EH-N35EH
Inkqubo yokuThuthwa kweMveliso yeMagnet eSintered Neodymium
Izixhobo zemagnethi ekrwada kunye nezinye izinto zesinyithi ziveliswa kubuninzi bexesha kwaye zanyibilika kwiziko lokungeniswa.
Emva kokugqitywa kwamanyathelo enkqubo ahlukeneyo, ii-ingots zenziwa zangumgubo ukuba zibe ngamasuntswana anobungakanani obuninzi. Ukuthintela i-oxidation ingenzeki, amasuntswana amancinci akhuselwe yi-nitrogen.
Amasuntswana ombane abekwe kwijig kwaye intsimi yemagnethi iyasetyenziswa ngelixa iimagnethi zicinezelwe kwiimilo ikakhulu. Emva kokubumba kokuqala, ioyile yokucinezelwa kweoyile iya kuya phambili ukwenza imilo.
Amasuntswana ombane abekwe kwii-ingots ezicinezelweyo kwaye ziya kuphathwa ubushushu kwisithando somlilo. Ubuninzi beengots zangaphambili zibetha kuphela iipesenti ezingama-50 zobuninzi bokwenyani ekucoceni. Kodwa emva kokuthunga, uxinaniso lokwenyani yi-100%. Ngale nkqubo, umlinganiso weengots uphantse wancipha nge-70% -80% kwaye umthamo wayo uncitshiswe ngama-50%.
Izinto ezisisiseko zemagneti zibekiwe emva kokuba kugqitywe inkqubo yokuntywila kunye nokuguga. Amanqanaba aphambili kubandakanya ubuninzi be-flux density, ukunyanzela, kunye nemveliso yamandla ephezulu iyarekhodwa.
Kuphela ngoomazibuthe abaphumelele uhlolo abathunyelwa kwiinkqubo ezilandelayo, ezinje ngoomatshini kunye nokudibanisa.
Ngenxa yokuncipha kwenkqubo yokuntywila, imilinganiselo efunekayo ifezekiswa ngokusila iimagnethi ngearrasives. Abrasives yedayimane isetyenziselwa le nkqubo kuba umazibuthe unzima kakhulu.
Ukulungela ngokufanelekileyo imeko eziza kusetyenziswa kuyo, iimagnethi zixhomekeke kwizinto ezahlukeneyo unyango lomphezulu. Nd-Fe-B iimagnethi zihlala zisesichengeni somhlwa ngenkangeleko ephathwe njengemagnethi ye-NiCuNi, iZn, Epoxy, Sn, Black Nickel.
Emva kokutyabeka, imilinganiselo enxulumene noko kunye nokuhlolwa kokubona kuya kwenziwa ukuqinisekisa ukubonakala kwemveliso yemagnethi. Ngaphandle koko, ukuqinisekisa ukuchaneka okuphezulu, nathi kufuneka sivavanye ubungakanani ukulawula ukunyamezelana.
Xa ukubonakala kunye nobukhulu bokunyamezelana kwemagneti kufanelekile, lixesha lokwenza uzibuthe kwicala lemagnethi.
Emva kovavanyo kunye nemagnethi, iimagnethi zikulungele ukupakisha ngebhokisi yephepha, nditsho nepallet yomthi ngokweemfuno zabathengi. I-Magnetic Flux inokuhlulwa yintsimbi yomoya okanye ixesha elivelayo lokuhambisa.